Indlu Eyakhiwe Ngamapulangwe #3 Izi - I-Airbnb
Indlu Eyakhiwe Ngamapulangwe #3 Izi
Indlu Eyakhiwe Ngamapulangwe Yasezintabeni ethulile eduze kwe-Cloud Croft, NM. Eduze nokugijima eqhweni, ukuthenga, izindawo zokudlela nokuzingela. Phumula ngokubukwa okuhle kwezintaba nokuphakama kwelanga nokushona kwelanga okuhle!
Indlu eyakhiwe ngamapulangwe enamakamelo okulala angu-2 enobhavu owodwa onobhavu we-jacuzzi, neshawa. Ikhishi linemishini yokupheka nendawo yokudlela ehlezi phansi. Usofa ungena embhedeni. Uvulandi wangaphambili unetafula nezihlalo ezinendawo yokosa inyama.
I-Wifi Yamahhala kanye ne-Satellite
Indawo enhle! Izolile futhi iyimfihlo!
Indlela elula yokusithola, ukuthi izindlu ezakhiwe ngamapulangwe ziphakathi kwamamayela angu-27 no-28. Uphawu lukhona oluthi "Izindlu Zethu Ezakhiwe Ngamapulangwe". Uzobona nenkundla yokudlala eceleni kophawu. Izindlu ezakhiwe ngamapulangwe ziyatholakala ngakho kufanele kube lula ukuthola indlu yakho eyakhiwe ngamapulangwe. Ukhiye uzoba eceleni kwe-TV. Njalo shiya i-heater knob ku #1 uma uphuma, ukuze amapayipi angafrizi. Ngenkathi uselapho ungayilungisa kunoma yiliphi izinga.
Akukho umsindo omkhulu ngemva KUKA-10PM. Uma uphuma qiniseka ukuthi ushiya I-HEATER KNOB ku #1. Uma kungenjalo, amapayipi azofriza futhi uzoba nesibopho sokuzikhokhela. QINISEKA UKUTHI USHIYA INDAWO IHLANZEKILE njengoba uyitholile! Lokhu kungigcina ngingakhokhisi inani lokuhlanza elengeziwe. Kufanele ngikhokhe ukuze ihlanzwe futhi angikwazi ukugcina amanani ngendlela enginayo, uma kuthatha amahora angu-4-6 ukuhlanza indlu eyakhiwe ngamapulangwe. Konke kuyahlanzwa, ngakho-ke yishiye ukuze kube lula ukuthi intombazane ikwenze. Kungasiza futhi uma unqamula imibhede olele noma elala kuyo. Futhi, beka amathawula asetshenzisiwe phansi egumbini lokugezela, noma eshaweni, Hhayi emshinini wokuhlanza, ingayonakalisa, uma imanzi. Qoqa udoti wakho bese uwufaka emgqonyeni wangaphandle kuvulande. Ungashiyi udoti esikhwameni emphemeni, uwufake emgqonyeni noma izilwane zizowuthola. UNGABEKI AMALAHLE ku-propane grill, noma usebenzise i-starterreon!!! Yebo, abantu bakwenzile lokhu futhi kuyamangalisa ukuthi basahlala nathi kulo mhlaba. Ungabeki iphepha lasendlini yangasese eliningi kakhulu ethoyilethi. Azikho izindwangu zokusula, ama-drapers noma imikhiqizo yabesifazane. Uma indlu yangasese ivaliwe, vumela indlu yangasese iyeke ukusebenza bese usebenzisa i-platunger enikeziwe. Indlu yangasese izogeleza uma uqhubeka nokudonsa isibambo ngaphambi kokuba indlu yangasese ibe nethuba lokuyeka ukusebenza. Ungangcoli nge-heater yamanzi ashisayo engenalo ithangi!!! Uzokhokhiswa, ngoba ipayipi kufanele liphume futhi liyisethe kabusha. Indlela esebenza ngayo ithangi, i- igaluni ngomzuzu ngamunye..ngakho i-Lower the water, i- eshisayo futhi esheshayo izoshisa. Ungahambi ugijime amanzi ngokugcwele ngoba ngeke asebenze kahle. Futhi kufanele ifudumeze amanzi abandayo ngempela...ngakho-ke yinike isikhathi.
Uma uphuma...Shiya indlu eyakhiwe ngamapulangwe ihlanzeke ngendlela oyithole ngayo... yenza konke okusemandleni akho! Cisha izibani, geza izitsha bese uzibeka kude, kungcono lapho uzithole khona. Uzokhokhiswa ngezinto ezingekho noma ezonakele! Kungcono ukuxhumana nami ngokushesha uma kunomonakalo, noma inkinga ngokuthile ukuze sikwazi ukuyixazulula, Okokugcina, shiya ukhiye futhi ukude ngasemaphandleni Ngithemba ukuthi uzohlala kahle kakhulu! Uma unemibuzo, sicela uzizwe ukhululekile ukuxhumana nami :). Ucingo lwami luthi: 575-921-4wagen noma 432-213-1494 noma udlule emiyalezweni ye-airbnb. Siyabonga kakhulu,